Waaxda Dab damiska Muqdisho oo loogu deeqay qalab casri ah – Kalfadhi
Waaxda Dab damiska Muqdisho oo loogu deeqay qalab casri ah
Saraakiil ka socotay qeybta mashaariicda rayidka ee dowladda Talyaaniga ayaa ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir qalab casri ah oo loogu tallogalay waaxda dab damiska Muqdisho,sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Qalabkan dab damiska ah ayaa wax badan ka beddeli doona baahida ay shacabka Muqdisho u qabaan adeeggan.
‘’ Waxaan uga mahadcelinayaa saraakiisha ka socota qeybta mashaariicda rayidka ah ee dowladda Talyaaniga oo maanta noogu yimid xarunta dowladda hoose si ay noogu wareejiyan agabkan casriga ah ee lagu horumarinayo dab damiska caasimadda,’’ ayuu yiri guddoomiye Yariisow.
Guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in tani ay billow tahay balse ay rajeynayan in ay sii socoto.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dedeaal xoogan ugu jira dib u soo celinta adeegyadii muhiimka ahaa sida Nadaafadda iyo dab damiska.
Madaxda Soomaalida oo ku heshiiyay doorasho qof iyo cod ah 2020